မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: August 2009
DAILY RAMZAN DOAS ROZAS 1 to 30
Wala hao la, wa la ku wa tha, Illah billah, Aleyohazweem.
Special thanks to brother Ko Kyaw Zeyar Oo
Posted by Ordinary person at 2:29 PM No comments:
Posted by Ordinary person at 10:45 AM No comments:
''CALL TO ME; I WILL ANSWER YOUR (PRAYER)'' The Holy Quran (40:60)
Posted by Ordinary person at 7:05 PM No comments:
ရမ်ဇာန်လမြတ်၌ သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးတော်များ
ဟဇ်ရသ် အလီ (ရသွေ့) ဆင့်ပြန်သည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် မဟာတမန်တော်မြတ် (ဆွ) ထံ ရမ်ဇာန်လမြတ်၌ သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးနှင့်ပတ်သက်၍ လာရောက်မေးမြန်းမှုကို မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ…. ‘အကြင်သူသည် လမြတ်ရမ်ဇာန်၌ သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုပါက မိခင်ဝမ်းကြပ်အတွင်းမှ မွေးဖွားသန့်စင်လာသော ကလေးပမာ အပြစ်ဂုနဟ်အပေါင်းမှ ကင်းစင်သွားမည်။
၁။ တစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် မိခင်ဝမ်းကြပ်အတွင်းမှ မွေးဖွားသန့်စင်လာသကဲ့သို့ အပြစ် (ဂုနဟ်) အပေါင်းမှကင်းစင်တော်မူလိမ့်မည်။
၂။ နှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ၎င်းနှင့်တကွမိဘနှစ်ပါးလုံး (အီမာန်ရှင်) ဖြစ်ပါက အပြစ် (ဂုနဟ်) အပေါင်းမှ ချမ်းသာလွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။
၃။ သုံးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ (အရ်ရှ်) ပလ္လင်တော်အောက်မှ ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး ကြွေးကြော်မည်မှာ “အို-အီမာန်ရှင် သင်ရဲ့ (အအ်မာလ်)ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်သာပြုကျင့်ပါမူ သင်၏ယခင်မကောင်းမှုများအားလုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။
၄။ လေးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ကောင်းကင်ကျကျမ်းကြီးများဖြစ်သော (၁) သောင်ရားသ်ကျမ်း (၂) အင်န်ဂျီလ်ကျမ်း (၃) ဇဗူရ်ကျမ်း (၄) ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကျမ်းများကို သိလာဝသ်ပြုသကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးတော်များ ရရှိပေမည်။၅။ ငါးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် မတ်စ်ဂျိဒေဟရာမ် နှင့် မတ်စ်ဂျိဒေအက္ကဆွာဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ကြီးများ၌ နမာဇ်ဝတ်ပြုသကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပေမည်။
၆။ ခြောက်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ဗိုင်သွလ်မအ်မူးရ်ကျောင်းတော်ကြီးကို သ၀ါးဖ်ပြုသကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပေမည်။
၇။ ခုနှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် တမန်တော်မူစာ (အလိုင်း) နှင့် ဖိရ်အောင်န်၊ ဟာမန်တို့ စစ်ဖြစ်ပွားချိန် တမန်တော်မူစာ (အလိုင်း)၏ ဘက်မှ ပါဝင်ကူညီသကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပေမည်။
၈။ ရှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က တမန်တော် အိဗ်ရာဟီးမ် ခလီလွလ္လာဟ်အား ချီးမြှင့်မှုမျိုးကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပေမည်။
၉။ ကိုးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ)သခင်၏ သက်တမ်းတော်နှင့်အညီအမျှ ကုသိုလ်အကျိုးစ
၁၀။ ဆယ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် လောကတစ်ခွင်လုံးထက် သာပို၍ကောင်းမြတ်သောအရာကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပေမည်။
၁၁။ ဆယ့်တစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် စစ်မှန်သောမုအ်မင်န်ဖြစ်ပါက လောကမှ အီမာန်နှင့်တကွခေါ်ယူသော အဆင့်အတန်းမျိုးရရှိပေမည်။
၁၂။ ဆယ့်နှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ကိယာမသ်နေ့တွင် ၎င်းသူ၏မျက်နှာမှာ လပြည့်ဝန်းပမာ လင်းဝင်းတောက်ပသော အဆင့်အတန်းမျိုးရရှိပေမည်။
၁၃။ ဆယ့်သုံးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ကိယာမသ်နေ့တွင် မကောင်းမှုအပေါင်းမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရပေမည်။
၁၄။ ဆယ့်လေးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ကိယာမသ်နေ့ ၌ ထိုသူအား ၎င်းသရာဝီဟ်နမာဇ်ကပင် သက်သေခံတော်မူပေမည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသူအား စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းမရှိ ဂျန္နတ်သုခဘုံသို့ ၀င်ရောက်ရပေမည်။
၁၅။ ဆယ့်ငါးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အရ်ရ်ှပလ္လင်တော်ကို ထမ်းထားသော ဖရိရ်ှသဟ်များသည် ၎င်းသူအတွက် အရှင်မြတ်ထံတော်ပါး၌ ရဟ်မသ်တော်များ တောင်းခံပေးသနားတော်မူပေမည်။
၁၆။ ဆယ့်ခြောက်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ဂျဟန္နမ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိပြီး ဂျန္နတ်သုခဘုံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်စေတော်မူပေမည်။
၁၇။ ဆယ့်ခုနှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် အမ်ဗေရာ (အလိုင်း)များ၏ အဆင့်အတန်းမျိုးရရှိပေမည်။
၁၈။ ဆယ့်ရှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် သင်နှင့် သင်၏မိဘနှစ်ပါးစလုံးကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က လက်ခံတော်မူပေမည်။
၁၉။ ဆယ့်ကိုးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ဂျန္နတ်တွင် ၎င်းရရှိသောအဆင့်အတန်းထက်သာပို၍ တိုးမြှင့်ပေးခြင်းခံရပေမည်။
၂၀။ နှစ်ဆယ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် “ရှဟီဒီ” သာသနာ့သူရဲကောင်း “ဆွာလေဟီးန်” သူမွန်သူမြတ်များကဲ့သို့ ကုသိုလ်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပေမည်။
၂၁။ နှစ်ဆယ့်တစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ဂျန္နတ်သုခဘုံတွင် ၎င်းသူအတွက် “နူရ်” အလင်းရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဂေဟာတစ်ခု ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပေမည်။
၂၂။ နှစ်ဆယ့်နှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ကိယာမသ်ကမ္ဘာ့တစ်ရားခွင်နေ့တွင် ၎င်းအား သောကအပေါင်း စိုးရိမ်မှုအပေါင်းမှ ကင်းဝေးစေတော်မူပေမည်။
၂၃။ နှစ်ဆယ့်သုံးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ဂျန္နတ်သုခဘုံတော်အတွင်း မြို့ကြီးတစ်မြို့ ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပေမည်။
၂၄။ နှစ်ဆယ့်လေးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် (၂၄)မျိုးသော တောင်းဆုများကို ကဗူလ်ပြု လက်ခံတော်မူပေမည်။၂၅။ နှစ်ဆယ့်ငါ်းရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် “ကဗရ်” အဇားဗ်ပြစ်ဒဏ်အပေါင်းမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုခြင်းခံရပေမည်။
၂၆။ နှစ်ဆယ့်ခြောက်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ၎င်း၏သက်တမ်းအပြင် နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်သာပို ၍ အကျိုးစ၀ါးဗ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပေမည်။
၂၇။ နှစ်ဆယ့်ခုနှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူအား “ပွလ်ဆွေရားသ်” တံတားပေါ်မှ မျက်စိတစ်မှိတ်လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်း ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုခြင်းခံရပေမည်။
၂၈။ နှစ်ဆယ့်ရှစ်ရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် ဂျန္နတ်ဥယျာဉ်တော်တွင် ထပ်ဆင့်တိုးမြှင့်တော်မူခြင်းခံရပေမည်။
၂၉။ နှစ်ဆယ့်ကိုးရက်ညမြောက် သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုသူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကဗူလ်ပြုလက်ခံတော်မူသော ဟဂ်ျအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာပြုသကဲ့သို့ အကျိုးကျေးဇူးတော်များရရှိပေမည်။
၃၀။ သုံးဆယ်ရက်ညမြောက်၌ သရာဝီဟ်နမာဇ်မပျက်မကွက်ဝတ်ပြုသူအား အရှင်မြတ်မိန့်တော်မူမည်မှာ “အို-ငါအရှင့်ဗန္ဒဟ်၊ သင် ဂျန္နတ်သုခဘုံအတွင်းမှ မည်သည့်သစ်သီးဝလံမျိုးကိုမဆို စားသုံးလော့၊ စလ်စဗီးလ်ရေဖြင့် ရေချိုးလော့၊ ကောင်စရ်ရေကို သောက်သုံးလော့၊ သင်၏အရှင်သခင်သည် ငါအရှင်မြတ်သာလျှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ သင်သည် ငါ၏ဗန္ဒဟ်ကျေးကျွန်ဖြစ်သည်။
မုစ်လင်မ်အပေါင်းတို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ လမြတ်ရမ်ဇာန်မှာ (သရာဝီဟ်) နမားဇ်ကို စွဲမြဲစွာဖတ်ကြပါ။ ဘယ်သောအခါမှ ပျင်းရိ၍ မစွန့်လွှတ်သင့်ပေ။ မကောင်းမှုလုပ်ရပ်များကို စွန့်လွှတ်ပြီး အရှင်မြတ် နှစ်သက်တော်မူသောအရာများကို ပြုလုပ်ဆောက်တည်နိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါစေ။
ဤစာကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုသောသူအားလုံးသရာဝီဟ်နမာဇ်ကိုအပြည့်အ၀၀တ်ပြုနိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါစေ။ ( အာမီန်း )
Posted by Ordinary person at 2:13 PM No comments:
Lipstick သုံးတတ်သောအမျိုးသ္မီးများအတွက် Halal lipstick information
** Halal lipsticks & cosmatics ကို Saudi Arabia နိုင်ငံနှင့် တစ်ချို့အာရပ်နိုင်ငံများတွင် တင်ရောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။
Looking for lipsticks which are HALAL and safe to be consumed for MUSLIMS?
Non halal ingredients used in the make up and lipsticks always make you think twice and stopped you from using those cosmetics?
We will help you to find lipsticks which are safe to be consumed for muslim woman, produced inamuslim country and CERTIFIED HALAL by the authorized Islamic body
If you are muslim woman who are ...
Concern about the ingredients used in the cosmetics and lipsticks that your are using...
Looking for alternative make up and lipsticks which are halal and safe to be consumed...
Looking for alternative lipsticks which are leads free...
YOU SHOULD SERIOUSLY READ ON WHAT I'M GOING TO REVEAL HERE...!
Fazi Abdul Latif
Dear muslim sisters,
It has been very upset for me to find out about the ingredients mostly used in the make up, cosmetics and lipsticks currently available in the market. Most of them were made from non halal ingredients and even some of the lipsticks are not safe for our health. I have had experienced of using lipsticks which in the end changed my lips natural color into dark due to the leads content. This including over the counter lipsticks which were carrying well known brands. What are more surprising is to find out some of the main ingredients used in the lipsticks which are as follows :
Pig’s Fat – Reason being is Pig’s fat is the only fat which does not melt at average body temperature while all other fats start melting. From the research done by the scientist,the pig’s fat does not melt on human body and lipstick manufactures have no option but to use it in their lipstick in order to help the lipstick stays on the lips.
Alcohol– Most of the lipsticks formula contains alcohol which is prohibited in Islam. Infact for certain individual, they will suffer some allergic reaction due to the alcohol content in the lipstick
Baby Placenta– some cosmetic producers used placenta as part of the ingredients in their cosmetics and lipstick products. Placenta is not only haram in Islam but also harmful to our health. And many more other non halal ingredients
I am very excited to introduce and offer this fine quality halal lipsticks for you to try on. The choice of colors available, the feeling of confidence knowing the ingredients used are halal and permitted in Islam and yet my lips stay moist, and never dry through out the day.
You might be wondering what are the main ingredients in this V2 Halal Lipsticks :
Pure Goat’s Milk - Goat's milk contains enzyme, vitamins and nourishment to maintain healthy and beautiful lips. It isanatural moisturiser to balance the lip's moisture for supple and smooth lips.
Aloe Vera– to helps lips stay supple and smooth and acting as moisturizer. Aloe vera has been used as one of the main ingredients in the V2 Halal Lipstick since it is well known for it’s benefits as soothing properties and help the lips to stay moist.
Vitamin E– acting as anti oxidant to helps your lips stays healthy, preventing wrinkles and from dry off so that your lips will feel comfortable through out the day whilst wearing the the V2 halal lipstick.
Reasons why you should choose V2 halal lipsticks
Halal ingredients – the ingredients used are halal, permitted in Islam and safe to be consumed by muslim.
Mixture of aloe vera and goats milk have been used as replacement for Pig’s gelatine
Vitamin E is acting as anti oxidant as well as to protect the lips from dry off and free from wrinkle.
100% muslim products , produced inamuslim country and all the factory employees are muslim.
Certified Halal by Jakim (Islamic Development Department of Malaysia) – the ingredients used are permitted by Islamic law and safe to be consumed by muslims. Application for halal approval requires all documents in regards to the ingredients used must be submitted and revealed, followed by inspection at the manufacturer’s factory.
Long lasting – with just one application, the lipstick color stays on your lips for up to3times meals taken
Well, actually the above are not the only reasons why you should choose V2 Halal Lipsticks. V2 Halal Lipsticks are the best choice for muslims for the following additional reasons :
Produced by manufacturer with GMP Status (Good Manufacturing Practice)
Helps the alternatif halal product to buildamuch better Islamic community worldwide
After all of the above reasons don’t you think that it is the time for you to switch to halal lipstick instead of over the counter lipsticks?
For more information, click here http://www.halallipstick.com/
Posted by Ordinary person at 10:06 PM No comments:
အာအေ့ရှာ သခင်မ (RDYA-ALLAH-ANHA) ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အာအေ့ရှာ သခင်မ၏ဖခင်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာ၏ ပထမမြောက် သမတ အဗူဗကရ်ဖြစ်၏။ မိခင်မှာသခင်မ ဇိုင်နဗ် ဖြစ်သည်။ အာအေရှာသခင်မ၏ဘွဲ့အမည် မှာ '' ဆွစ်ဒ်ဒီကာ (အမှန်ပြောဆိုသူ) '' ဖြစ်သည်။ အာအေရှာသခင်မသည် နဗဝီသက္ကရာဇ် ၄ ခုနှစ် ရှောင်ဝါလ်လတွင် ဖွားမြင်သည်။
အာအေရှာသခင်မသည် အစ္စလာမ်သာသနာရေးဆိုင်ရာပညာရှင် ပါရဂူ တစ်ဦးဖြစ်၏။ သာဝကကြီးများပင်လျှင် အချို့ပြသနာရပ်များကို အာအေရှာသခင်မထံ လာရောက်မေးမြန်းကြရသည်။ အာအေရှာသခင်မနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရှင် '' အေမာမ်ဇွဟ်ရီ'' က အောက်ပါအတိုင်း ချီးကျူးစကား ရေးသားထား၏။'' အာအေရှာသခင်မသည် သာဝကကြီးများတွင် ပညာအတတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ သာဝကကြီးများပင်လျှင် ထိုသခင်မထံသို့ လာရောက်မေးမြန်းကြရသည်။
''သမတကြီး အဗူဗကရ်၊ အို့မရ်၊ အွဆ်မာန် သခင်တို့ လက်ထက်များတွင် အာအေရှာ သခင်မသည် အစ္စလာမ်တရား ဓမ္မသတ်များကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။တမန်တော်မြတ် မို့ဟမ္မဒ်သခင်၏ ဩဝါဒတော်များအနက် ဩဝါဒတော်ပေါင်း ၂၂၁၀ သည် အာအေရှာသခင်မထံမှ တစ်ဆင့်ကြားသိရ၏။ ယင်းဩဝါဒတော်များအနက် မိန့်ခွန်းတော်ပေါင်း ၁၇၄ တိတိကို ဗို့ခါရီကျမ်းနှင့် မွတ်စလင်မ်ကျမ်းကြီးများတွင် လက်ခံရေးသား ဖေါ်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။
အစ္စလာမ်သာသနာရေးဆိုင်ရာအချို့ နက်နဲသော ပြသနာများ အထူးသဖြင့် တမန်တော် မို့ဟမ္မဒ်သခင်ထံသို့ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ (ဝဟီ) မုက္ခပါဌ်တော် ကျရောက်ပုံ၊ ကုရ်အာန်၏အစီအစဉ်၊ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုနည်း၊ ဟဂ်ျအကြောင်း၊ ဟစ်ဂျရတ်အကြောင်း၊ ဗဒ်ရ်စစ်ပွဲ၊ ဇတွရ်ရေကာအ်စစ်ပွဲ၊ ခန္ဒတ်က် စစ်ပွဲအကြောင်း၊ အမျိုးသ္မီးများ၏သစ္စာရှိပုံ၊ တမန်တော်သခင်၏ နောက်ဆုံးအပြုအမူ၊ တမန်တော်သခင်၏ အိမ်တွင်းရေး၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်ကို တမန်တော်မြတ်ခံယူခြင်းအကြောင်း အစရှိသည့် အကြောင်းများသည် အာအေရှာသခင်မမှ တစ်ဆင့်စုံလင်စွာသိရှိရသည်။အာအေရှာသခင်မသည် စာပေအရာတွင်ပါရဂူဖြစ်ခဲ့၏။ ပြောဆိုရာတွင် နှုတ်ချို၏။
အာအေရှာသခင်မ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားများသည် အလွန်တရာမှ မြင့်မြတ်၏။ အထူးသဖြင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ၏။ အလှူဒါန ရက်ရော၏၊ ရဲရင့်၏။တစ်ခါသော် '' အမီးရ်မို့ အာဝေယာ'' က အာအေရှာသခင်မအား ဒေရ်ဟမ် ၁၀၀ ၀၀၀ တစ်သိန်းဆက်သရာ အာအေရှာသခင်မသည် ထိုငွေများကို တစ်နေ့အတွင်းမှာပင် ဆင်းရဲသားများကိုလှူဒါန်းလိုက်၏။ ထိုနေ့တွင် အာအေရှာသခင်မသည် ဥပုသ်စောင့်ထား၏။ ဥပုသ်ဖြေရန် အချိန်ရောက်သည့်အခါ အစာအဟာရ ဝယ်ရန်အတွက်ပင် ငွေတစ်ပြားမှ မကျန်ခဲ့ပေ။အာအေရှာသခင်မသည် အမြဲလိုလိုပင် ဥပုသ်စောင့်၏။ တဟဂ်ျဂျွဒ်၊ တရာဝီဟ်၊ အောင်ဝါဘီန် ခေါ်ဆွလာသ်ဝတ်ပြုမှုများကို အမြဲတစေပြု၏။ နှစ်စဉ်နှင့်အမျှဟဂ်ျပြု၏။
ကြေးကျွန်များကို အထူးသနားကြင်နာ၏။ ကြေးကျွန်ပေါင်း ၆၇ ယောက်ကို ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်စေခဲ့၏။အမီးရ်မို့ အာဝေယာ လက်ထက် ဟစ်ဂျရီသက္ကရာဇ် ၅၈ ခုနှစ်၊ ရမဇာန်လတွင် အာအေရှာ သခင်မသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်ကိုခံယူသွားပါသည်။
ထိုအချိန်တွင်အာအေရှာသခင်မ၏ အသက်မှာ ၅၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ သခင်မကို ''ဂျန္နတွလ်ဗကီအ်'' ကဗာလ်စတန်တွင် မြှုပ်နှံထားပါသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာသင်ခန်းစာ စတုတ္ထတွဲမှ အကျဉ်းချုံး ကောက်နှုတ် တင်ပြပါသည်။
Posted by Ordinary person at 3:03 AM No comments:
ရှအ်ဗာန်လ ၁၅ ရက် (ရှဗ်ဗေ့ဗရာအသ်) ညည့်မြတ်တွင် တရားအားထုတ်ရန် ကျင့်စဉ်များ
ရှဗ်ဗေ့ဗရာအသ် နှင့် ရှဗ်ဗေ့ကဒရ် ညည့်မြတ်တို့၏ (နိဖိလ်) ကျင့်စဉ်များ
ဆွလာသွတ် သတ်စ်ဗီးဟ် နမာဇ်၏ အကျိုးစဝါဗ်နှင့် ဖတ်နည်းစည်းကမ်းများ
မှတ်ချက်။ ရှအ်ဗာန် ၁၅ ရက် ညည့်သည် ဒီလ 5.8.2009 (after magarib namarz) ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ordinary person at 1:38 PM No comments:
ဤလသည် အစ္စလာမ်ဟစ်ဂ်ျရီ ပြက္ခဒိန်၏ ရှအ်ဗာန်လဟုခေါ်ပါသည်။ ရှအ်ဗာန်ဆိုသည်မှာ အာရဗီစကား ရှူဗာမှလာ၍ အပင်အကိုင်းအလက်တို့တိုးတက်နေသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ တမန်တော်မြတ် မိန့်ဆိုခဲ့သည်မှာ ရှအ်ဗာန်လသည် ကျွန်ုပ်၏ လဖြစ်ပြီး ရမ်မသွာန်လမြတ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏လဖြစ်သည်။ (Daylami)
တမန်တော်မြတ်သည် ဤရှအ်ဗာန်လတွင် ဆွီယမ်ဥပုတ်သီလစောင့်ထိန်းလေ့ရှိသည်။ လမြတ်ရမ်မသွာန်ကို ဂုဏ်ပြုသောအနေနှင့်လည်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ် မိန့်ဆိုခဲ့သည်မှာ ရှအ်ဗန်လသည် လူအများမေ့လျှော့နေကြသော ရာဂျာဗ်လနှင့် ရမ်မသွာန်လတို့ ၏အလယ်မှ လဖြစ်ပြီး ထိုလတွင်လူသားတို့၏ပြုကျင့်ခဲ့သမျှကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင်တင်ပြခြင်းခံရမည်။
ကျွန်ုပ် ဆွီယမ်ဥပုတ် သီလစောင့်ထိန်းနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ပြုကျင့်ခဲ့သမျှတို့ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ တင်ပြခြင်းခံရမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်ဟု တမန်တော်မြတ်မိန့်ခဲ့ဘူးပါသည်။
* ထိုလတွင်လူသားတို့၏အနာဂါတ်ရေးကို မလာအိကာ ကောင်းကင်တမန်များရေးသား၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ တင်ပြမည်။ ထိုတင်ပြချက်ကို ရမ်မသွာန်လမြတ်တွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှဆုံးဖြတ်တော်မူမည်။
* ထိုလတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုနှစ်တွင် သေဆုံးမည့်လူများ၏ စာရင်းကိုသတ်မှတ်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ သေဆုံးချိန်ကို ကျွန်ုပ် ဆွီယမ် ဥပုတ်သီလစောင့်ထိန်းနေချိန်တွင် ကျရောက်စေလိုပါသည်ဟု တမန်တော်မြတ်မိန့်ခဲ့ပါသည်။
ရှအ်ဗာန်လတွင် ဆွီယမ်ဥပုတ်သီလစောင့်ထိန်းလိုလျှင် ရှအ်ဗန်လဝက်ထိဘဲ ဆွီယမ်ဥပုတ်သီလစောင့်ထိန်းခိုင်းပါသည်။ ကျန်လဝက်ကို ရမ်မသွာန်လအတွက် အားဖြည့်စေပါသည်။
ဗူခါရီကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ ထိုလတွင် တမန်တော်မြတ်သည် ဂျေရူစလင်မြို့ရှိ ဗိုင်သွရ်မိုးကဒ်ဒဒ်(စ) ဗလီဘက်သို့ ၁၆ လ (သို့) ၁၇ လကြာလှည့်ပြီးဆွလာသ်ဝတ်ပြုရာမှ မက္ကာဟ်ကျောင်းတော်ဘက်သို့ ကီဗလာဟ်ကို လှည့်၍ဖတ်ချင်စိတ်ပေါ်လာ၏။ ထို့နောက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ အောက်ပါကုရ်အာန် အာယတ်တော်များကျရောက်လာပါသည်။
အသင်သည် မိမိစိတ်တွင်းဝယ် ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရာ၌မျက်နှာမူရန် ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ကို ကစ်ဗ်လဟ်ဖြစ်စေလို၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အထံတော်မှ အမိန့်တော်ကိုမျှော်လင့်လျက် မိုးကောင်းကင်သို့အကြိမ်ကြိမ်မျက်နှာမော်၍ ကြည့်နေသည်ကို ငါအရှင်မြတ်သည် မုချမြင်တော်မူသည်ဖြစ်လေရာ အသင်နှစ်သက်လေသော ကစ်ဗ်လဟ်ဘက်သို့အသင့်အား ငါအရှင်မြတ်သည် မုချဧကန် လှည့်၍ပေးတော်မူအံ့။ သို့ဖြစ်ရာ အိုနဗီတမန်တော် အသင်သည် မိမိမျက်နှာကို ယခုချိန်မှစ၍ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုရာတွင် မတ်စ်ဂျိဒေဟရာမ် (ဝါ) ကအ်ဗဟ်ကျောင်းတော်ဘက်သို့လှည့်ပါလေ။ ထိုမှတပါးအသင်တို့သည် မည်သည့်နေရာ အရပ်ဒေသ ၌ပင် ရှိစေကာမူ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုသောအခါ ယင်းမတ်စ်ဂျိဒေဟရာမ် ဘက်သို့သာလျှင် မိမိတို့မျက်နှာများကို လှည့်ကြကုန်လော့။
စင်စစ်ငါအရှင်မြတ်သည် အသင်နဂိုမူလက မျက်နှာမူခဲ့ဘူးသည့်ကစ်ဗ်လဟ် (ဝါ) ဗိုင်တုလမုကဒ္ဒတ်စ်ကို ကစ်ဗ်လဟ် အဖြစ်ယာယီအားဖြင့် ထားရှိတော်မူခဲ့ခြင်းအကြောင်းမှာ နောက်အနာဂတ်တွင် ကစ်ဗ်လဟ် မျက်နှာမူရာ ကအ်ဗဟ် ဘက်သို့ပြောင်းလွှဲသောအခါ ရစူလ်တမန်တော်၏ အမိန့်ကို လိုက်နာသောသူနှင့် မိမိတို့ခြေဖနောင့်ဘက်သို့ ပြန်လှည့်သွားသူတို့ကို ခွဲခြားသိတော်မူရန်သာ ဖြစ်ချေသည်။ စင်စစ်သော်ကား ကစ်ဗ်လဟ်ပြောင်းလွှဲရန် အမိန့်တော်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က တရားလမ်းမှန်ကို ညွှန်ကြားပြသ ပို့ဆောင်တော်မူခြင်းကို ခံရသူတို့မှအပ အခြားသူတို့ အဘို့လိုက်နာရန် အလွန်ပင် ခဲယဉ်းလှပေသည်။ အမှန်စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါတရား (ဝါ) မူလကစ်ဗ်လဟ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူ၍ ဆွလာသ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြသည်ကို အချည်းနှီးအကျိုးမဲ့ ဖြစ်စိမ့်သောငှါ ဤသို့ပြောင်းလွှဲရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်တော်မူသည်မဟုတ်ချေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်လူခပ်သိမ်းတို့အပေါ်ဝယ် စင်စစ် နူးညံ့သိမ်မွေ့တော်မူတသောအရှင်၊ မပြတ်မစဲ သနား ညှာတာတော်မူထသောအရှင်၊ ဖြစ်တော်မူပေသတည်း။
မကြာခင် အစ္စလာမ်၏ ရှာဗေဗရအ်ညည့် ရောက်ပါတော့မယ်။ အင်ရှာအလ္လာဟ် ရှာဗေဗရအ်ညည့် မတိုင်ခင် စာဖတ်သူများဖတ်ရှူကျင့်သုံးနိုင်ရန် ကျင့်စဉ်များနှင့် ဆွလာသွတ် သတ်စ်ဗီးဟ်ဖတ်နည်းနှင့် အကျိုးစဝါဗ်များကို တင်ပြပါမည်။
Posted by Ordinary person at 1:59 AM No comments:
The word “sha’baan is derived from the word "shu'ba", which means branch and itself means consecutively escalating or undisturbed increase. The Arabs used to branch out during this month to look for water.
The Arrival of the Sha’baan moon brings with it numerous blessings. Just as the initiation of rainfall begins with "pitter patter" such blessings reach us in the same accord and fashion. These blessings progressively escalate throughout the month so that by the middle of the month they have reachedaconsiderable amount, reaching their peak by the end of Ramadan.
Just asafarmer prepares forafruitful harvest by harrowing his acreage so that the soil may readily retain water; in contrast our souls are geared by the presence of such blessings in Sha’baan effectively preparing us forafruitful and completely advantageous Ramadan. The Holy Prophet (SAW) has said,
"Sha’baan is my month and Ramadan the month of Allah Ta'aalaa." [Daylami]
The month of Sha’baan is one of the meritorious months in the Islamic calendar and it is reported in an authentic hadith that the Holy Prophet (SAW) used to fast most of this month. Although these fasts are not obligatory, Sha’baan is the month immediately preceding the month of Ramadan, therefore some preparatory measures are suggested by the Holy Prophet (SAW) through his sunnah and his practices.
The blessed companion Anas (RA) reported that the Holy Prophet was asked
“Which fast is the most meritorious after the fasts of Ramadan” he replied “Fasts of Sha’baan in honour of Ramadan”
The blessed companion Usama ibn Zaid (RA) reported that he asked the Holy Prophet (SAW)
“O Messenger of Allah (SAW), I have seen you fasting in the month of Sha’baan so frequently that I have never seen you fasting in any other month” he replied “That (Sha’baan) isamonth between Rajab and Ramadan which is neglected by many people. And it isamonth in which an account of the deeds (of human beings) is presented before the Lord of the universe. So I wish that my deeds be presented at time when I am inastate of fasting”
Ummul Mu’mineen ‘Aishah said
“The Holy Prophet (SAW) used to fast in the whole of Sha’baan.” I said to him “Messenger of Allah (SAW), is the month of Sha’baan your most favourite month to fast?” He said “In this month Allah (SWT) prescribes the list of the persons dying this year. Therefore, I like that my death come to me when I am inastate of fasting.”
In another tradition she said
“The Holy Prophet (SAW) would sometimes begin to fast continuously until we thought he would not stop fasting, and sometimes he used to stop fasting until we thought he would never fast. I never saw the Messenger of Allah (SAW) fastingacomplete month, except the month of Ramadan, and I have never seen him fasting inamonth more frequently than he did in Sha’baan.”
In another repot she said
“I never saw the Messenger of Allah (SAW) fasting inamonth so profusely as he did in the month of Sha’baan. He used to fast in that month leaving onlyafew days, rather, he used to fast almost the whole of the month.”
Ummul-Mu’mineen Umm Salmah said
“I never saw the Messenger of Allah (SAW) fasting for two months continuously except in the months of Sha’baan and Ramadan.”
These ahadith indicate that fasting in the month of Sha’baan, though not obligatory, is so meritorious, that the Holy Prophet (SAW) did not like to miss them. It should be kept in mind that the fasts of this month are for those persons only who are capable of keeping them without causing deficiency to the obligatory Ramadan fasts. The Holy Prophet (SAW) has also forbidden Muslims from fasting one or two days prior to the commencement of Ramadan. Abu Hurairah reported the Holy Prophet (SAW) said,
“Do not fast after the first half of the month of Sha’baan has gone.”
According to another report, the Prophet (SAW) said,
“Do not precede the month of Ramadan with one or two fasts.”
In essence, the Holy Prophet (SAW) himself used to fast most of the month of Sha’baan, because he had no apprehension of weakness or weariness before the month of Ramadan. As for others, he ordered them not to fast after the 15th of the month for the feat that they would lose their strength and freshness before Ramadan started and asaresult would mot be able to welcome the month with enthusiasm.
A significant event that occurred during this month was the change in the direction of salat. Bukhar reported that Al-Bara said the Prophet prayed facing Bait-ul-Maqdis in Jerusalem for sixteen or seventeen months but he wished that his Qiblah would be the Ka'ba. Allah (SWT) revealed the following Qu’ranic verses
“Verily! We have seen the turning of your (Muhammad's (SAW)) face towards the heaven. Surely, We shall turn you toaQiblah (prayer direction) that shall please you, so turn your face in the direction of Al-Masjid- al-Harâm (at Makkah). And wheresoever you people are, turn your faces (in prayer) in that direction. Certainly, the people who were given the Scriptures (i.e. Jews and the Christians) know well that, that (you’re turning towards the direction of the Ka'bah at Makkah in prayers) is the truth from their Lord. And Allah (SWT) is not unaware of what they do.” (Al-Baqarah 2:144)
The Holy Prophet then offered 'Asr prayers (in his Mosque facing Ka'ba at Makkah) and some people prayed with him. A man from among those who had prayed with him, went out and passed by some people offering prayer in another mosque, and they were in the state of bowing. He said, "I, (swearing by Allah (SWT),) testify that I have prayed with the Prophet (SAW) facing Makkah." Hearing that, they turned their faces to the Ka'ba while were still bowing. Some men had died before the Qiblah was changed towards the Ka'ba. They had been killed and we did not know what to say about them (i.e. whether their prayers towards Jerusalem were accepted or not). So Allah (SAW) revealed
“And Allah would never make your faith (i.e. prayer) to be lost (i.e. your prayers offered (towards Jerusalem). Truly Allah is Full of Pity, Most Merciful towards mankind.” (Al-Baqarah 2:143)
1. "Qibla" the direction to be adopted within salaah, was reverted back to the "Ka'aba" in Makkah (after being
converted to Baitul Muqaddas in Jerusalem forashort period of time). This took place two years after Hijrion the
15th of Sha’baan
2. Fasting in the blessed month of Ramadan was made compulsory in the year2AH on the 25th of Sha’baan
3. Hafsa (RA) was joined in matrimony with the Prophet (SAW) in3AH
4. Hafsa (RA) took leave from this world in 45 AH
5. Hussain (RA), the grandson of the Prophet's (SAW) was born, four years after Hijri on the 5th of Sha’baan
6. The Battle of Banu Mustaliq took place in Sha’baan during which, the "Aayah of Tayammum" (purifying with sand
before salaah) was revealed, in the year5AH
7. The daughter of the beloved Prophet (SAW) Umme Kulthum (RA) took leave from this world, in the9AH
Posted by Ordinary person at 2:35 AM No comments:
ရမ်ဇာန်လမြတ်၌ သရာဝီဟ်နမာဇ်ဝတ်ပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇ...
Lipstick သုံးတတ်သောအမျိုးသ္မီးများအတွက် Halal lipst...
ရှအ်ဗာန်လ ၁၅ ရက် (ရှဗ်ဗေ့ဗရာအသ်) ညည့်မြတ်တွင် တရား...